Yabelana ngeeHolide zakho - Galveston County Food Bank Yabelana ngeeHolide zakho - Galveston County Food Bank
Cofa apha ukuze ubuyele kwiwebhusayithi ephambili yeGalveston County Bank Bank
Umnyhadala wama-42 woNyaka we-ABC13 yoKwabelana ngeHolide yakho yokuTya kuQhobo lokutya uya kubanjwa
LWESIBINI, 29 NOVEMBA ukusuka ngentsimbi yesi-8 kusasa ukuya kweye-12 ebusuku.
Iindawo ezimbini zokulahla iminikelo;
IBHOLA ISIKOLO ESIPHAKAMILEYO
I-4115 Avenue O
I-GALVESTON COUNTY FOOD BANK - UKWAKHIWA KWE-ADMIN
Cofa i-logo yethu ukukhuphela isiGaba seSisombululo esiPhakamileyo kwizinto zakho zokuThengisa.
Ngubani ongabamba idrayivu yokutya ye-SYH?
Samkela nabani na ofuna ukuncedisa ukuphelisa indlala kwaye ongathanda ukubamba iphulo lokutya esebenza neqela le-ABC13 Yabelana ngeeHolide zakho. Nceda uqhagamshelane URobyn Bushhong, Umququzeleli waMahlakani oLuntu ukuze wabelane ngeeHolide zakho zokuTya Drive, kwi-409.744.7848 okanye rbush1147@aol.com ngolwazi olungakumbi kunye nendlela yokubandakanyeka ngayo.
Zeziphi izinto ozamkelayo kwi-SYH yokutya yokuqhuba?
Ewe, siyazamkela izinto zempilo ezinje ngezi:
Khetha iNjongo yokuba kungakanani ukutya ongathanda ukukuqokelelela.
Bhalisela i-ABC13 Yabelana ngeHolidays Food Drive yakho ngokuqhagamshelana noRobyn Bushhong kwa-409.744.7848 okanye rbush1147@aol.com.
Nyusa iDrive yakho ukuze wazise abanye ngomnyhadala wakho ngoonobumba, i-imeyile, iiflaya kunye newebhusayithi. (qinisekisa ukufaka ilogo ye-GCFB kuyo nayiphi na into yokuthengisa)
Ndiyazisa njani i-SYH yam yokutya?
Kukho isisombululo esiphezulu se-logo yeGCFB kweli phepha lifumanekayo lokukhuphela. Nceda ufake ilogo yethu kuyo nayiphi na into yokuthengisa oyenzela umcimbi wokuqhuba ukutya.
Ndiyithatha phi eyam Umnikelo weSYH?
Yonke iminikelo ingahanjiswa nokuba yeyiphi na indawo NgoLwesibini nge-29 kaNovemba 2022 ukusuka ngentsimbi yesi-8am ukuya kweye-12pm.
Isikolo esiphakamileyo seBhola-4115 Avenue O, eGalveston
I-GCFB-213 6th Street Street, isixeko saseTexas
IDrayivu yeNgxowa-mali ye-SYH
Inokuqokelelwa njani imali yokwabelana ngeeholide zakho zeholide?
Imali inokuqokelelwa njengemali ezinkozo, itshekhi okanye i-intanethi ngokusebenzisa ifom yesibonelelo ye-SYH apha ngasentla.
Ukujonga, nceda uhlawule kwiGalveston County Bank Bank. Qaphela umbutho / igama leqela lakho ngasezantsi ngasekhohlo kwitsheki, ukuze umbutho / iqela lakho lifumane ikhredithi.
Kwi-Intanethi, Iminikelo inokwamkelwa kwifom ephezulu kweli phepha. Ungabelana ngekhonkco le-url, https://www.galvestoncountyfoodbank.org/shareyourholidays/ nge-imeyile nabaxhasi bakho.
Cofa apha ukuze ukhethe i-imeyile
9am - 3pm (NgoLwesibini-Lwesine)
9am - 12pm (ngolwesiHlanu)
Iiyure ze-Ofisi: 8 am-4pm (ngoMvulo-Lwesihlanu)
Isakhiwo seNkonzo yoLawulo:
213 6th Street N., eTexas City
Ibhanki yokutya yaseGalveston County ibhaliswe njenge-501 (c) (3) inhlangano engenzi nzuzo. Igalelo litsalelwa irhafu ukuya kuthi ga kwinqanaba elivunyelwe ngumthetho.
IGalveston County Food Bank ikholelwa ekuqhubeni ishishini ngokunyaniseka okukhulu nangokunyaniseka. IiNkonzo zeNdlu yokuKhanya ivumela i-Galveston County Food Bank ukuba ixhase le migaqo ngokusebenza njengesixhobo samalungu oluntu, kubandakanya nabasebenzi beBhanki yokutya, ukungenisa iingxelo eziyimfihlo, iingcebiso, okanye izikhalazo kumntu wesithathu onceda ulawulo lweGalveston County Food Bank ukusombulula imiba ngelixa igcina ubungcali imigangatho.
Eli ziko libonelela ngamathuba alinganayo.
Nceda ucofe apha ukuze ufunde Imfihlo yabanikeli.